Gaariga Apple ayaa si otomaatig ah u dahaadhi kara daaqadaha markii loo baahdo | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan u maleynayaa gaariga Apple inuu yahay kan loogu hadal haynta badan yahay xitaa ma heyno qiyaas ku aadan inuu dhab noqon doono iyo in kale. Laba shati oo cusub ayaa tilmaamaya in shirkadda Californian-ku ay awood u leedahay inay ku darto tikniyoolajiyad cusub oo ay ku shaqeyso Gaariga Apple ayaa si otomaatig ah u dahaadhi kara daaqadaha.
Gaariga Apple wuxuu si otomaatig ah u dahaadhi karaa daaqadaha waa fikrad ka muuqata laba shey
Gaariga Apple ayaa si otomaatig ah u dahaadhi kara daaqadaha iyada oo loo marayo nidaam caqli-gal ah. Tikniyoolajiyadda dareeraha ah ee dareeraha ah ayaa loo isticmaali doonaa in lagu joojiyo iftiinka qoraxda si dadka kale aysan u eegin gudaha gaariga. Tikniyoolajiyaddan mugdiga ah ee mugdiga ahi aad ayey waxtar u leedahay. Wadayaasha qaar waxay su'aal u tahay nabadgelyada gadaasheeda maaddaama laydhka adag laga fogaado. Dadka kale waxay sidoo kale macnaheedu tahay in lagu daro qarsoodi gudaha gaariga.
Patent-ka laftiisu wuxuu ka hadlayaa adeegsiga dareeraha dhalada ah. Diiwaanka waxaa loo yaqaan "Aaladaha martida loo yahay ee martida loo yahay" modulators crystal ". Gaarigu wuxuu lahaa daaqado leh lakabyo badan, oo loogu talagalay in lagu xakameeyo nuucyada kala duwan ee iftiinka. Tan waxaa loo qaybin karaa dherer dherer muuqda iyo kuwa aan muuqan. Dhinaca aan muuqan, shaandhada xulashada ayaa xannibi karta iftiinka ultraviolet iyo iftiinka infrared-ka dhow iyo ka fog.
Apple waxay soo jeedinaysaa in a "Fududeeyaha fudud ee kareemka dareeraha ah". Submermer-yada polymeric-ku waxay noqon karaan kuwa heer-kul-kululeeyaha ah, oo la qaabeyn karo si loo xaqiijiyo dusha sare ee daaqadaha iyo qaababka, halka midabku uu noqon karo mid dichroic ah ama isku dhaf ah.
Suurtagalnimada a "Nidaamka iyo habka loogu talagalay asturnaanta firfircoonida iyo daaqada daaqada". Patent-kan labaad wuxuu xusayaa in caadooyinka caadiga ahi "si waafi ah uga ilaalinaynin dadka degan qorraxda iyo noocyada kale ee iftiinka" bannaanka baabuurka, marka lagu daro in aan la siinin "asturnaan ku filan." Patentku wuxuu soo jeedinayaa adeegsiga aaladda xisaabinta ee kuxiran qalabka wax lagu duubo Awood u leh inuu hagaajiyo heerka daasadda ee kan kale, guud ahaan adoo hagaajinaya heerka danab ee filimka xoqida ee la isku hagaajin karo.
Mar kasta oo aan ka hadalno shatiyada, waxaa dhici karta in aysan dhab ahaan dhaqan gelin. Waxay noqon karaan fikrado kaliya. Apple waxay diiwaangelisaa qaar badan oo ka mid ah fikradahan sanadkiiba, tiro aad u badanna laguma arko suuqa. Waxaan u dheg taagayaa fikradahan la xiriira gaariga Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Gaariga Apple wuxuu si otomaatig ah u dahaadhi karaa daaqadaha markii loo baahdo
Gambaleelka Digniinta, ku ilaali gurigaaga nidaamkan digniinta oo dhameystiran oo si sahlan loo rakibo